TIRMIDIYOW QOFAAN ADIGA AHEEN MA JAAHILBAA MISE ……….
Sc wr wb dhamaan
Waxaan aad uga xumahay in aragtidaaada qofkii qaboo aragti ka duwan aad u aragto inuu jaahil yahay, iyadoo qofka haduuba qaldamo loo cudur daari karo, laakiinse qofkaasi maadaama uu aragtidayda aragti ka duwan qabo waa jaahil waxan filayaa inaysan usluubta islaaamka ka mid aheen.
Nin ka labaxay tirmida qof aragtidiisa aragti kaduwan shegay majiro ilaa waa kadaba qaataa wax uusan qofka muslimka ka mudana waan ku sheegaa.
Waxaanse layaabay markay gabadha tiri fahan xumada tirmida. Inkastoo hadal meel ka dhac ku ah walaalkay tirmadii uu yahay, hadana waxaa dhici karto in uu sabab u yahay in hadaladaas oo kale la yiraahdo.
Mar aan aragti figradiisa kaduwan meeshan ka dhiibtay waxuu igu salaamay Waxaan filayaa in walaal Camaar hadalka kusoobooday laakin waxbadanna uusan kafiirsan laftiisa , taasoo arga gax igu riday, maxaa yeelay waxan is waydiiyay tirmidi ma jaraan jar baa u taalo oo aad kasoo booday, maxaadan se ka fiirsan, jawaabse kama bixin oo waxan ka baqay in uu waxaas iyo wax ka wayn ka yimaadaan, meeshana danbi ka dhasho.
Laakiin aragtidii uu la kali noqday tirimida waxaa jawaab ka bixiyay xasan wadaad, isagana waxuu ku yiri XASAN WADAAD JAHLIGU AAMUSKA AYUU KUFIICANYAHAY , kadaroo dibi dhal taydaaba laqaatay markaan arkay xasan wadaad cin waanka loo soo qoray, qof muslina oo wadaad u eg ama wax diin ah ka hadlayo inuu qof walaalkiis aragti uu uga duwan yahay jaahil ku sheego waa wax laga naxo, waxaadna moodaa tirmida in seeflaboodnimo ay xoogaa ku jiro iyo waxaan kala garan waayay in aragtidiisa ay cajabisay oo uu u arko in tiisa cidaan ku tagneen ay badi cad yihiin.
Dadka u hadlo nooca tirimidi oo kalana maahan dad wax xaliyo ee waa dad kala geeyo aragtida umada meeshii la isku soo dhawayn lahaa, maxaa yeelay hadal kaste oo laqoro meesha xun unbuu ka eegayaa, iyada oo lagayabo 73 albaab oo wanaagsan inaygali karto taasina waxan filayaa in ay salka ku hayso fudeedka soomaalinimo ee nagujirto iyo cilmi yarida diineed oo aan haysano.
Taasoo qofkii labo kitaab akhristaba ka dhigayso inuu diinta dhameeyay, koley tirimida madaafiicdiisa waa soo gamayaa ee waa inaan u sabarnaa walaalkeen, inta seefta galka ay uga baxsan tahay, iyadaa dan galka u geli doonto.
Waxaana hubaa in markuu mudo joogo uu isaga layaabi doono seef labood nimadiisa iyo hadalada adadag ee uu ku hadli jiray.
Maxaa yeelay howlahaas waa looga horeeyay waana layaqaanaa calaamadahoda iyo sababta keento, mardhan baanse falan qeen doonaa, guntii iyo gabagabadii qofka muslimka ah waa inuu sadri wayn oo wax qaado leeyahay xushmad iyo hadal wanaagsana ku hadlo, ixtiraamana aragtida kaduwan ee walaalihiis ay qabaan uusana noqona mid ay afiicnaato aragtidiisa kaliya waxa kala daaqada kasaaro.
Bye sc wr wb